NVIDIA 470.42.01 dia miaraka amin'ny fanohanan'ny RTX 3070 Ti, 3080, tohana ho an'ny OpenGL, Vulkan ary maro hafa | Avy amin'ny Linux
NVIDIA 470.42.01 dia miaraka amin'ny fanohanan'ny RTX 3070 Ti, 3080, ny fanohanana ny OpenGL, Vulkan ary maro hafa
Andro vitsy lasa izay ny famoahana ny kinova vaovao an'ny mpitandrina NVIDIA 470.42.01 izay nanampiana andiana fanatsarana ary indrindra ny fanohanana karatra sary bebe kokoa.
Ho fanampin'izay dia ho hitantsika koa fa nampiana izy io Fanohanana ny fampivoarana ny fitaovana voalohany ho an'ny OpenGL sy ny Vulkan ho an'ny fampiharana X11 izay mihazakazaka amin'ny tontolo Wayland mampiasa ny singa Xwayland DDX. Raha dinihina amin'ny fitsapana natao, rehefa mampiasa ny sampana mpamily NVIDIA 470, ny fahombiazan'ny rindranasa OpenGL sy Vulkan amin'ny X natomboka tamin'ny XWayland dia saika mitovy amin'ny mandeha amin'ny server X mahazatra.
Nasongadina ihany koa fa sary nampihatra ny fahaizana mampiasa ny teknolojia NVIDIA NGX amin'ny divay sy ny fonosana Proton novolavolain'i Valve mba hampandeha ny lalao Windows amin'ny Linux. Anisan'izany ny divay sy Proton, ankehitriny afaka mihazakazaka lalao manohana ny haitao DLSS, izay ahafahan'ny Tensor cores an'ny karatra horonan-tsary NVIDIA ampiasaina handrefesana sary miorina amin'ny zava-misy amin'ny alàlan'ny fomba fianarana milina mba hampitomboana ny famahana fa tsy ho very kalitao.
Raha hampiasa ny fiasa NGX amin'ny fampiharana Windows dia natomboka tamin'ny divay, tafiditra ao ny tranomboky nvngx.dll. Amin'ny lafiny divay sy ny kinova Proton azo antoka, ny fanohanan'ny NGX dia mbola tsy nampiharina, fa ny fanovana kosa dia efa nanomboka nampidirina tao amin'ny sampana Proton Experimental hanohanana io fampiasa io.
Del nanampy fanohanan'ny GPU vaovao GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3080 Ti, A100-PG506-207, A100-PG506-217, CMP 50HX dia naseho, ankoatry ny fanesorana ny fameperana ny isan'ny sehatra OpenGL mandeha miaraka, izay voafetra ihany ankehitriny noho ny habeny ny fahatsiarovana misy.
Endri-javatra iray hafa izay miavaka amin'ity kinova vaovao an'ny mpamily NVIDIA 470.42.01 ity dia ny fanohanana ny teknolojia PRIME hampidina fampandehanana miasa amin'ny GPUs hafa (PRIME Display Offload) ao anaty configurations izay amboaran'ny mpamily NVIDIA ny loharano sy ny GPU kendrena, ary koa rehefa alefa ny mpamily AMDGPU ny loharano GPU.
Ary koa ny modely kernel NVIDIA-peermem.ko vaovao izay mamela ny RDMA hampiasaina hiditra mivantana amin'ny fitaovan'ny antoko fahatelo toy ny Mellanox InfiniBand HCA (Host Channel Adapters) mankany amin'ny fahatsiarovan'i NVIDIA GPU nefa tsy mandika data amin'ny fahatsiarovan'ny rafitra.
Nanampy fanampiana ho an'ny fanitarana vulkan vaovao
Amin'ny alàlan'ny default, ny fanombohana SLI dia ahafahana mampiasa GPUs misy haben'ny fahatsiarovana horonan-tsary.
Ny fikirakirana nvidia sy ny NV-CONTROL dia manome fitaovana fitantanana cooler default ho an'ny tabilao izay manohana ny fifehezana ny rindrambaiko.
Ny firafitra dia misy ny firmware gsp.bin, izay ampiasaina hanetsehana ny fanombohana GPU sy ny fifehezana ny sisin'ny chip an'ny processeur GPU (GSP).
Ahoana ny fametrahana mpamily NVIDIA 470.42.01 amin'ny Linux?
Fanamarihana: alohan'ny hanatanterahana ny fizotrany rehetra dia zava-dehibe ny hijerenao ny fampifanarahana an'ity mpamily vaovao ity amin'ny alàlan'ny fikirakirana ny solo-sainanao (rafitra, kernel, lozisialy Linux, kinova Xorg).
Satria raha tsy izany dia afaka miafara amin'ny efijery mainty ianao ary tsy maintsy tompon'andraikitra amin'izany izahay na tsia satria fanapahan-kevitrao ny hanao izany na tsia.
Ho anao liana amin'ny fahaizana mametraka ireo mpamily Nvidia ao amin'ny rafitrao, ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny dia ny mankany amin'ny tranonkala Nvidia ofisialy ary ao amin'ny fizarana fampidinana azy ho hitan'izy ireo ny kinova vaovao an'ny mpamily vonona ny alaina.
Vantany vao vita ny fisintomana dia zava-dehibe ny ahatsiarovantsika ny toerana nisintomana ilay rakitra, satria tsy maintsy hatsahantsika ny fotoanan'ny mpampiasa sary hametrahana ny mpamily amin'ny rafitra.
Mba hampijanonana ny seho sary an'ny rafitra, noho izany dia tsy maintsy manorata ny iray amin'ireto baiko manaraka ireto izahay, miankina amin'ny manager ampiasainay ary tsy maintsy ampiasainay ireto fanalahidy manaraka ireto, Ctrl + Alt + F1-F4.
Eto izahay dia hangatahana ny fahazoan-dàlana hidirantsika amin'ny rafitra, miditra ary manao izahay:
fijanonan'ny jiro service sudo
fijanonana sudo /etc/init.d/lightdm
fijanonana gdm service sudo
fijanonana sudo /etc/init.d/gdm
fijanonana mdm service sudo
fijanonana udo /etc/init.d/kdm
fijanonana sudo service kdm
fijanonana sudo /etc/init.d/mdm
ankehitriny tsy maintsy mametraka ny tenantsika ao anaty fampirimana isika izay nisintomana ilay rakitra ary Manome alalana famonoana amin'ny:
Y farany tsy maintsy mihazakazaka ny installer amin'ny:
Amin'ny faran'ny fametrahana tsy maintsy avelantsika hamerina ilay session amin'ny:
sudo service lightdm manomboka
sudo /etc/init.d/lightdm manomboka
sudo service gdm manomboka
sudo /etc/init.d/gdm manomboka
sudo service mdm manomboka
sudo /etc/init.d/kdm manomboka
sudo service kdm manomboka
sudo /etc/init.d/mdm manomboka
Azonao atao ihany koa ny misafidy ny hamerina ny solosaina mba hahafahan'ny fanovana vaovao sy ny mpamily entina ary hovonoina amin'ny fanombohana ny rafitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » NVIDIA 470.42.01 dia miaraka amin'ny fanohanan'ny RTX 3070 Ti, 3080, ny fanohanana ny OpenGL, Vulkan ary maro hafa
BaikalDB, OpenRASP, EasyFaaS: Source Source Baidu - Fizarana 2
TPM: kely ny zava-drehetra momba ny Modely Platform Matoky. Ary ny fampiasana azy amin'ny Linux!